Mahatsapa tena amin’ny fanarahan-dalàna | NewsMada
Mahatsapa tena amin’ny fanarahan-dalàna
Mitaky fampiharana lalàna sy mahatsapa tena amin’izay fanarahan-dalàna izay ny olom-pirenena rehetra. Na ankizy mpianatra aza, efa beazina amin’ny fanarahan-dalàna any an-tsekoly ka mainka fa lehibe tokony hahatsapa tena. Firenena mandroso, mahay manara-dalàna amin’ny lafiny rehetra, indrindra manomboka amin’ny lehibe. Fiteny matetika ny hoe tsy misy ambonin’ny lalàna fa tsy izay loatra ny zava-misy hita na fantatra.
Io lehibe tokony hahay hanome ohatra tsara io no mbola tsy hitan’ny vahoaka tsotra. Firifiry ireo manam-pahefana ambony mandika lalàna, saingy izay izy manam-pahefana ambony izay. Ny fiarany, ohatra, tsy azo sakanana na savaina na aiza na aiza. Firifiry amin’ireny manam-pahefana ambony ireny, tsy fantatra marina na gaboraraka mihitsy ny fandaniana izay tsy misy miala avy any am-paosiny, ohatra, ny Jirama. Ny vahoaka kely karama anefa, tsy afa-miala amin’izany.
Mety misy milaza hoe izay ny vokatry ny fianarana nataony, ny fahefana azony, nefa raha firenena mahantra toa an’i Madagasikara, anjakan’ny tsy fanarahan-dalàna sy fanamparam-pahefana, nofinofy izany fampandrosoana izany. Ny ONG iraisam-pirenena Oxfam sy ny ONU (zahao lahatsoratra eran-tany), manambara ny tsy fitoviana be loatra eo amin’ny mpiara-belona ka manahirana ny ady amin’ny fahantrana.